PuTTY RND ဖိုင်ဆိုတာဘာလဲ။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > putty rnd ဖိုင် - ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
putty rnd ဖိုင် - ငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
PuTTY RND ဖိုင်ဆိုတာဘာလဲ။
ဒါကကျပန်းနံပါတ်တစ်မျိုးဖိုင်SSH session တစ်ခုအတွက်လိုအပ်သည်။ကSSH client တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်လုံခြုံသောအဝေးထိန်းအစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။သေးငယ်သောထို့အပြင်ကျပန်းအရေအတွက်ကအမျိုးအနွယ်ကိုလိုအပ်သည်ဖိုင်SSH cryptography ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောကျပန်းရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်များ၏ခန့်မှန်းရခက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်။၁၇ ဇန်နဝါရီ။ ၂၀၁၄
အခုချိန်ထိဘယ်လောက်ကောင်းတာလဲ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်ကြိုးစားကြည့်တာကော။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်ကို local web server အတွက်ရှာဖွေရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းတွင်သိမ်းရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ local web server software တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Perl scripts များကိုဝေးလံသောအိမ်ရှင်သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းပြီး၎င်းတို့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်မည်၊ ထို့နောက်နောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်၌၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်ကိုလေ့လာကြမည်။ အဲဒါကိုစာရင်းမြစ်အောက်ရှိ cgi bin ဖိုဒါထဲမှာသိမ်းပြီး hello dot cgi လို့ခေါ်ပါ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်ကိုသိမ်းပြီးပြီ။ ငါတို့ web browser ကိုသွားပြီ။ ငါ mozilla ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် web browser တိုင်းကအတူတူပါပဲ။ file တစ်ခုတည်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် hello dot CGI ကိုမေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့အတွင်းပိုင်းဆာဗာတစ်ခုရလာသည်ကို command line မှ splits လုပ်ခြင်းနှင့် browser မှလုပ်ခြင်းနှင့်ဆာဗာတွင်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ခြင်းခြားနားချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်သည် အမှားနှင့် ၀ ဘ်ဆာဗာနှင့် Perl h တို့၏အမှားအယွင်းများကိုသတ်မှတ်ပြီးနောက်တွင်၎င်းသည်မှတ်တမ်းဖိုင်တစ်ခုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script ကိုပြန်သွားပြီးပြcausingနာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းကြည့်ကြရအောင်။
ဒီမှာတစ်ခုတည်းသော command တစ်ခုက hello world ကိုသာပုံနှိပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်မှာ web server အားမည်သည့်အမျိုးအစားကိုအရင်ဆုံးပြောရန်အခြားလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးထားသည့်အတိုင်းတိကျစွာရိုက်ထည့်ရုံမကပဲ dash များအားလုံးကိုထည့်ပါ။ နေရာနှင့်မျဉ်းစောင်းမှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းစဉ်များမှတဆင့်အတိအကျမရှာဖွေသောလိုင်းဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆာဗာအားမည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုပြောပြပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်ကိုဖော်ပြမည့်လိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ script နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအရာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းကို hellodot cgi ဟုခေါ်သည်၊ web server သည် script တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးဖတ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည် file တစ်ခုသည် perl Executive မှ run ရမည်ကိုသိကြောင်းသေချာစေရန်ဤ script ၏ထိပ်ဆုံးတွင်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုထည့်ပါ။ Shebang လိုင်း ahash ဟုလူသိများသည်။ ထို့နောက် orl bang တွင် exclamation mark နောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Perl Executive တပ်ဆင်ထားသည့်အမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင် dants bants binary binary directory သို့မဟုတ် binit's အပြစ်ရှိသည်။ beca နောက်တဖန် Perl XE ကျွန်ုပ်တို့ Windows စနစ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြန်သွားကြစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာသို့ပြန်သွားပြီးအောင်မြင်စွာထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆာဗာပေါ်မှကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးထုတ်လွှတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့ပြီး browser သို့ပြန်ပို့သည်။ ဤလိုင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့မဟုတ်သူတို့ဘာလုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ပါ၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် script ကိုအလုပ်လုပ်ရန်လုံလောက်ပြီဖြစ်သည်
မိုက်ခရိုဆော့ authenticator ဘားကုဒ်
ကျပန်းအမျိုးအနွယ်ဖိုင်PGP (Pretty Good Privacy) စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်ဘို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်ကျပန်းနံပါတ်များ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 'randseed အမည်ရှိrnd 'နှင့် ' လျှောက်လွှာဒေတာ \_ PGP ကော်ပိုရေးရှင်း \_ PGP 'ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားသည်။ 150 ကျော်ဖွင့်လှစ်ဖိုင်ပုံစံဖိုင်ကြည့်ရှုသူAndroid။
Skype config ကို xml
ဒီနေ့ Windows ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုပြမယ်။
၎င်းကိုအမှန်တကယ်ဆာဗာဖြင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို Parallely တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Booty ကိုအသုံးပြုမည်။ FileZilla ကိုလည်းအသုံးပြုမည်။ ဖိုင်များကိုမည်ကဲ့သို့သွားရမလဲဆိုသည်ကိုမသိသောယောက်ျားများအတွက်သင်ပြမည်။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် client တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အား Linux server များသို့ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် Linux ဆာဗာများပေါ်တွင်သင် run နိုင်သကဲ့သို့တူညီသောအမိန့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် client တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆာဗာပေါ်တွင်မရှိသောအခါတွင် si Jin ကို Linux ဆာဗာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ သငျသညျ getinstalled SSH ကို run လိမ့်မယ်နှင့်ဤအထူးသ knockservant အပေါ် SSH ကိုအဖြစ် install လုပ်ထားသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ထားလိမ့်မယ်လိုပဲလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဂူးဂဲလ်ကိုဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ ငါ Linux ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Linux bashlets ထဲမှာထည့်ထားသလိုမျိုး putty တောင်တောင်မလိုချင်ဘူး။ ပထမဆုံး download ကိုဖွင့်ပါ၊ download putty တစ်ခုကိုရှာနေသည်။ ဒီမှာ putty ကို download လုပ်နိုင်သည်။ ဒီမှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက packet files တွေရှာဖို့လိုတယ်။ ဒီမှာ 32 bit နဲ့ 64 bit နဲ့တူတယ်။ သင့်မှာသင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေပြီးသင်လည်း 64 bit ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုလိုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Installer msi ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်ဆိုသည်ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုမြင်တွေ့ရမည်။ ယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ ခဏစောင့်ပါ။ ဤတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤတွင်ကိုင်ထားပြီးလျှင်နောက်တစ်ခါနှစ်ခါနှိပ်ပါ။ ဤအချက်ကို Putti Release 0.70 64 64- ကြိုဆိုသည်။ bit setup wizard နှင့် NextProgram ဖိုင်များကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ ဤတွင်သင်၏ Putti တပ်ဆင်ထားသည်မှာသင်၏ Putti သည် Program Filesguys တွင် C ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့်လာမည့်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် install လုပ်ထားသောဖိုင် ၄၀ ကို install လုပ်ပါ။ ဤဖိုင်များကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်စဉ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကလစ်နှိပ်ပါ သူတို့ကသင့်ကွန်ပျူတာအတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရုံပဲလားဟုဖြေပါလိမ့်မည်။ သင် readme ဖိုင်လိုအပ်သောကြောင့် readme ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာမှနုတ်ထွက်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ပြီးဖြစ်သောယခုဖိုင်ကိုမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်၍ ဤအပေါင်ခံစာရွက်ကိုပိတ်လိုက်ရန်လိုသည်။ ရှာဖွေရေးသို့သွားပါ။ Pooty-Poo ကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်နှစ်ဆနှင့်တူသည်။ သင်ဒီမှာမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤ ၀ င်းဒိုးကိုအသုံးပြုသောအခါပေါ်လာလိမ့်မည်။ system tray ထဲမှာဒီနေရာမှာ install လုပ်ပြီးသား။ ဒီအလုပ်ကနေငါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ icon ကိုမြင်နိုင်တယ်။ ငါ Windows သုံးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်လုပ်လေ့ရှိသလဲ။ system tray ထဲရှိ icon ကို system tray ထဲတွင် right click နှိပ်၍ system tray သို့ချိတ်ပါ။ ထို icon ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ putti ကိုပိတ်ပြီး connection အသစ်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်လိုပါကအောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်၏ IP ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်မည်သို့သုံးနိုင်သည်ကိုပြသရန်ဤနေရာတွင်လိပ်စာထည့်ပါ ဆာဗာ r၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည် Putty ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး FileZilla ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်သင်ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သော FileTransfer Protocol နှင့်တူသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်၊ ဖိုင်များကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြား server သို့လွှဲပြောင်းမည်၊ ထိုဖိုင်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့အခြား server တစ်ခုမှမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်စသည်နှင့်တူသည်။ FileZilla ဖြင့်သင်ပြပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤဖိုင်များသည် FileZilla တွင်ရှိသည်ကိုသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Hostgator cPanel သို့မဟုတ် Control Panel တွင်ရှိသည့်နေရာများသို့မဟုတ်ဖိုင်များတွင်ကျွန်ုပ်ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ဖိုင်မန်နေဂျာသည်နာကျင်မှုကိုအနိုင်ယူပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ် hostgator တွင်ရှိနေစဉ်ဖိုင်မန်နေဂျာကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ hostgator အကောင့်နှင့်အခြားသူများရှိဤ linux ဆာဗာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်၏ဖိုင်စနစ်ကိုဖွင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် FileZilla နှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ FileZilla မရှိလျှင်၎င်းသည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ ၀ င်ရောက်ပုံကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ဤဖိုင်များ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပုံကိုသင်ပြလိမ့်မည်။ FileZ illa ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆောင်းပါးများမှသင်မည်သို့မှတ်မိသည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ နှစ်ခု po ၏တ ဦး တည်းရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ် rts, 21 အတွက် FTP File Transfer Protocol သို့မဟုတ် SFTP အတွက် ၂၂ သည်ဤဆာဗာများကြားရှိဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်အတွက် SFTP အတွက် 22 သည် cPanel နှင့်အလုပ်လုပ်နေသည်ရှိသော်ဤ IP လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်၏ IP လိပ်စာကိုတွေ့နိုင်သည့်အတိုင်းပြပါ။ 192 185 point 62.73 ငါ FileZilla ကိုဖွင့်သောအခါသင်မှတ်မိသည့်အတိုင်းငါ FileZilla နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်သည်၎င်းအထောက်အထားများကိုမသုံးရတော့ပါ။ အတားအဆီးရှိသောဤမြှားကိုနှိပ်ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Username Bugatti နှင့်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည်ကိုတွေ့ပါ။ IP ကို ​​192.168.0.1 မြင်နိုင်သည်အတိုင်းခွဲခြားထားသည်။ စသည်ဖြင့်စသည်တို့ကိုဤတွင်အများသုံး html underscore undယခု cPanel သို့ပြန်သွားသောအခါသင်ဖျက်လိုက်သော file manager သို့ပြန်သွားလျှင် cPanel CP HT passwords ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ P point P သော့သည် sub-constructs နှင့် cache ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ဤ public public underscore FTP နှင့်dpublicunderscore HTML ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်မှတ်မိသည်မှာကျွန်ုပ် site သည်တိုတို tutorial များဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ် site ၌ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များအားလုံးသည် publicHTML ဖိုလ်ဒါတွင်ရှိသည်။ အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီဟာက WordPress ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ အချည်းနှီးတပ်ဆင်ခြင်းမရှိ။ အစစ်အမှန်ဆိုဒ်မရှိပါ။ ဒီစာမျက်နှာကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ putty ကိုဖွင့်ပြီး server နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် port 22 ကိုထားရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ hostname (သို့) hostname ကိုဒီမှာထည့်ပါ၊ သင်ဆက်သွယ်ရမည့် IP Address နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏0ဖိုင်ဖြင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါသင်အသုံးပြုသောတူညီသောလိပ်စာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ hostgator ကိုယခုဖွင့်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ၊ ဒီဟာကအခုထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုငါပြမယ်။ mycPanel မှဒီဆိုဒ်လိပ်စာကိုငါရလိမ့်မယ်။ ငါမင်းရဲ့ booty ကိုဖွင့်ပြီးဒီ ip ကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်။ မင်းကအသေးစိတ်သုံးခုနဲ့ဆာဗာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်။ ပထမက server ဒါမှမဟုတ် ip address Hosts ရဲ့ ip address ဖြစ်တယ်။ သင်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုမည့် username နှင့် password လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စများတွင်လက်ရှိအသုံးပြုသူ Bugatti သည်ညာဘက်ခြမ်းတွင်မည်သို့မြင်နိုင်သည်ကိုဤနေရာတွင်မှတ်မိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ server အတွက်စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် root တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ဆက်သွယ်မှုကိုစတင်ပါ။ hostname ထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ဤနေရာတွင်ဖွင့်ပါ။ So folks, ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် Hostgator နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ၊ Gators နှင့် SSH မှတဆင့်ဒီ Boot ၏ B ကိုသုံးပါ။ သူတို့ firewall port ကို 22 မဟုတ် 22, 22, 2222 2222 တို့ကသုံးလို့လုပ်လို့လား။ သင့်တွင် Linux ဆာဗာတစ်ခုရှိပါကသင်၏ဆာဗာပေါ်ရှိအချို့သောအသွားအလာအတွက်အချို့သော ports များကို သတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးသည် firewalls နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်အကြောင်းပြောဆိုပြီး sign up လုပ်ရန်လိုသည်။ ငါပြောခဲ့တာကလူတွေကများသောအားဖြင့်အဲဒါကိုထည့်ဖို့ချိတ်ဆက်မယ်၊ အဲဒီဆော့ဝဲကိုဆာဗာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သုံးနေတဲ့အတွက်များတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်မင်းမှာ 2222 port မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် 22 မှာ port နံပါတ်ရှိတယ်။ အဲဒါကိုပိုင်တယ်။ ဒါက port 22 ပါ။
Eror အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေဖြင့်သင့်အားအခြား port တစ်ခုကိုခွင့်မပြုပေ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၂ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ IP address ကိုရိုက်ထည့်ကြပါစို့။ ငါလို IP လိပ်စာလိုအပ်ပြီး username နှင့် log in လိုအပ်သည်။ ငါ bugatti ကိုရိုက်ပြီး Enter ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စကားဝှက်တွေကိုယောက်ျားတွေတောင်းလိမ့်မယ်။ မင်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာစကားဝှက်ကို paste လုပ်နိုင်တယ်။ ရိုက်ထည့်ရင်မင်းကရုပ်ရှင်တွေမှာမတွေ့ရဘူး။ အခြားဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိကော်ဖီနှင့်ယောက်ျားများကဲ့သို့သောစကားဝှက်ကိုဤနေရာတွင်ရေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Linux ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ပါကသင် Bash Soap ထဲသို့ဘာမှမကူးထည့်နိုင်ကြောင်းသင်သိသည်။ သို့သော်အီးယူ ၀ င်ရောက်မှုကိုဝင်ရောက်ရန်ညာဖက်နှိပ်နိုင်သည်။ အခုငါအခြား inan ကိုကူးထည့်လိုက်ပြီ။ အခုငါ putti ၀ င်းဒိုးကိုသွားလိုက်တယ်။ ညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးအပူကအစလိုက်ပြီ။ ၎င်းသည် user နှင့် host နှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ် log in လုပ်သည်။ ဒီမှာပြောခဲ့သလို linux command များကိုကြည့်နိုင်သည်။ သင် Linux ကို command များသင်သတိထားသင့်သည်။ သင် booty ကိုသုံးချင်သည်ဆိုလျှင်သင် Linux သေချာစွာလေ့လာရန်သေချာသည်။ ၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံး LS CD လမ်းညွှန်များစသည်တို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောအခြေခံ command များဖြင့်၎င်းတို့ကိုဒီမှာဘယ်ဘက်တွင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတူတူဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင် cPanel CP ကိုကြည့်နိုင်သည်၊ စသဖြင့်၊ ဤအများပိုင် html နှင့်ငါမမြင်မှီတိုင်အောင်၊ သင်ဤ home folder သို့ VP Admin VP Content နှင့် VP ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်၏ဘေးထွက်ဖိုင်များသည်ပထမနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် home directory ထဲသို့ဝင်လိုသည်ကိုမသိခဲ့ပါ၊ အမှန်အားဖြင့်ထွက်သွားသောအခါဤဖိုင်ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ သင်တို့အတွက် - မြင်နိုင်သည်အတိုင်းရိုးရိုး backslash ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် root directory ဖြစ်သော linux ပတ် ၀ န်းကျင်တိုင်းတွင်တော်တော်များများကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် putty တွင်ဤအရာကိုလုပ်လိမ့်မည်။ မြို့တော်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ အဲဒါကိုကွက်လပ်ထားခဲ့ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကိုမျဉ်းစောင်းနဲ့တူအောင်ထားနိုင်ပြီးဆိုလိုတာကငါတို့ဟာ ou ကိုညွှန်ကြားလိမ့်မယ် r root directory lab ဒါကိုငါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ LS ကိုနှိပ်ပါ။ ယောက်ျားတွေစာရင်းခွင့်ပြုချက်မရဘဲငြင်းပယ်ခံရတယ်။ ဒါကြောင့် CD ငါပြန်သွားပြီး LS ကိုသွားတယ်။ ဒီနေရာမှာဒီဖိုင်တွေကြည့်လို့ရရင် DNA ဆိုတာ Bash Logout ပါ။ ဝေးဒီဗွီဒီယိုကိုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရအောင်လုပ်ရမယ်။ ငါသွားပြီငါကိုယ်တိုင်ဒီလူတွေနဲ့ဘာမှမကြုံဖူးဘူး၊ ဟုတ်တယ်။ ဒီမှာမြင်နိုင်တာကငါတို့မှာအများသုံး html ရှိတယ်၊ ငါတို့မှာ publicTP ရှိတယ်၊ ဒီဖိုင်တွေ၊ သူတို့ကို Linux linux လို့ခေါ်တဲ့ directory များ၊ ဒီ thispootie ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဒီမှာရှိတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ root directory မှာရှိတယ်။
အများသုံး HTML ကိုသွားချင်ရင် underscoreHTML အောက်ကမြို့ထဲကိုသွားပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ။ LS ကိုသွားပြီး VP config VPcontent ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော့်ဖိုင်တွေကိုသွားကြည့်ပါတယ်။ if နှင့်ယခုငါ browser window ကဲ့သို့ဖွင့်လှစ်ပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် browser ကိုဖွင့်သောအခါဤဖိုင်များသည်ဤကဲ့သို့သောနေရာဖြစ်သည်။ putty ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဤဖိုင်များအားလုံးသည်ဤလမ်းညွှန်တွင်ရှိသည်။ ဒါတွေကိုကြည့်ပါ၊ ဒီလမ်းညွှန်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ သူတို့ဒီမှာရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်ရှေးရှေး၊ putty ကိုသင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်၊ သင်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကွက်လပ်အတိုင်းသွားပြီးပြတင်းပေါက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရလျှင်၊ အကယ်၍ home ကို root လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် directory တစ်ခုထဲမှာ forward slash လိုမျိုး CD cd-storagep lat ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး၊ အဲဒီ directory ကိုရောက်တော့ list ထဲကိုထပ်သွားပြီးတကယ်တော့ဒါကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ ဒီဆာဗာပေါ်ရှိဤအဓိက root လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးကိုခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ Italk ကိုဒီ server တွေဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို configure လုပ်လို့မရဘူး။ ဒီ server ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်၎င်းသည်သင်သိထားသင့်သောအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးကျန်အပိုင်းများမှာရိုးရှင်းသော linux command များဖြစ်သည်။ သင် database ကိုရှင်းလင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆက်ဒေတာဘေ့စ်များဖြစ်သည်။ ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းပါ။ Linux ronment people soyes များနှင့်သင်ပုံမှန်အသုံးပြုသော command များအတူတူပါပဲ။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုမျှဝေပါ။ ဤဆောင်းပါးကို subscribe လုပ်ပါ။ mychannel သို့ subscribe လုပ်ပါ။ မေးခွန်းများရှိပါကဤဆောင်းပါး၏အောက်တွင်သာထားပါ။ ကျွန်ုပ်ကူညီပေးပါမည်
0x87dd0019 အတွက် account.live.com.sign
AutoCAD ကဲ့သို့သောသင့်တော်သော software လိုအပ်သည်ပွင့်လင်းanRND ဖိုင်။ သင့်တော်တဲ့ဆော့ဝဲလ်မရှိရင် Windows message ကိုရလိမ့်မယ်ပွင့်လင်းဒီဖိုင်? 'or ' ၀ င်းဒိုးသည်မတတ်နိုင်ပါပွင့်လင်းဒီဖိုင် 'သို့မဟုတ်အလားတူ Mac / iPhone / Android သတိပေးချက်။
သပ်သပ်ရပ်ရပ် setting များကိုregistry ထဲမှာ HKEY_CURRENT_USER ထဲမှာ share လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲဒါတွေကိုသင်က export လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖိုင်တခြားနေရာအသုံးပြုရန်သည်။ တင်ပို့ရန် RegEdit.exe ကို run ။ HKEY_CURRENT_USER \_ Software ကိုသွားရန် \_ SimonTatham သို့သွားပါ။သေးငယ်သော။ အပေါ်ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပါသေးငယ်သောသစ်ပင်ထဲမှာ entry ကိုနှင့်ပို့ကုန်ကိုရွေးပါ။ ဒီကိုသိမ်းပါဖိုင်သင်၏လက်မ drive သို့သို့မဟုတ် H: drive သို့ရောက်ရန်။
ဤဆောင်းပါး၌သင်၏ rotor configuration ကိုမည်သို့ကယ်တင်ရမည်ကိုပြလိမ့်မည်။ ငါ gns3 undpotty potty ကို run နေစဉ်ငါ Windows7virtual machine တွင် Party ကို run လိမ့်မည်။ သင်ပါတီမှ console ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည် router သို့ telnet ပြုမည်။ ငါအဲဒီမှာငါရှိနေတာငါကြောက်မက်ဘွယ် potty ဆင်ခြင်ခြင်းပါတီပါတီဆော့ဖ်ဝဲတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ပါမယ်ငါပြုမည်ဤအမည်ကိုလမ်းကြောင်း 1 သို့ပြောင်းလဲ OK ကိုထည့်ပါ။ dot log မှထွက်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်အားလုံးသောစာအုပ်၏ထုတ်ဝေမှုကိုယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ login ကိုအမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရန်အတွက် configuration ကိုသိနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်စတင်ခြင်းမှသင်တတ်နိုင်သမျှအဆုံးသတ်ကိုအမြဲတမ်းဖြည့်စွက်ထားပါစေ။ စတင်ခြင်းသင်၏ console ဆက်သွယ်မှု၏အစကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိသောကြောင့်အဆင်ပြေပါစေ။ session ကိုလုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ဤ session ကို mine em rotor ဖြင့်လုပ်ပါ။ ok စကားဝှက်ဖြစ်ပါသည်ယခု ip ip ကိုဆက်ပြပါ။ ငါတိုက်ခိုက်နေအဲဒီမှာတစ် ဦး rotini ငါကိုယ့် runinterface သင် null zeroyeah ကြောင်းပြသပါ Interface သုညကိုကြည့်နိုင်သည်။ run သည်မှာအဆင်ပြေသည်။ IP interface ကိုပြသပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ သေချာအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ပြပွဲ ထပ်မံ၍ အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ကြောင်းပြသနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သွားပြီးလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပါက ပထမဆုံးကြည့်ရှုရန်ဆောင်းပါးများမှာသင်၏ configuration ကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါက command အပြည့်အစုံရိုက်ထည့်ရန်နှင့် showrun အချို့ကိုယခုသင်သိသော command များအကြားကြီးမားသောကွာဟမှုတစ်ခုတွင် showrun ကိုတွေ့နိုင်သည်ဆိုပါကပထမ command ဆောင်းပါးများသည် IProute ကိုပြသသည်။ ကိုယ့် console ကိုရိုက်ပြီး show ip routeoh-oh ကိုရိုက်ပါ။ showrun command ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ok ip show မှာ log un မှာထားပါ။ ပြီးတော့ ip route map ကိုထည့်လိုက်ရင်ဒါကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Putty သည် SSH ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းသည်လုံခြုံသောဝေးလံခေါင်သီသောအစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ SSH cryptography ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောကျပန်းရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်များ၏ခန့်မှန်းရခက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် PuTTY သည်ကျပန်းနံပါတ်မျိုးစေ့ဖိုင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် PUTTY.RND ဖိုင်တွင်သိမ်းသည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် C: User & lt; UserName & gt ;.
Rtyle putty RND အကြောင်းကိုသင်ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲ။
၎င်းသည် SSH session တစ်ခုအတွက်လိုအပ်သောကျပန်းနံပါတ်မျိုးစေ့ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Putty သည် SSH ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းသည်လုံခြုံသောဝေးလံခေါင်သီသောအစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ SSH cryptography ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောကျပန်းရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်များ၏ခန့်မှန်းရခက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် PuTTY သည်ကျပန်းနံပါတ်မျိုးစေ့ဖိုင်လိုအပ်သည်။
SSH cryptography ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောကျပန်းရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်များ၏ခန့်မှန်းရခက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် PuTTY သည်ကျပန်းနံပါတ်မျိုးစေ့ဖိုင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် PUTTY.RND ဖိုင်တွင်သိမ်းသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် C: User & lt; UserName & gt ;.
ထူးခြားသောလုံခြုံမှုလက်မှတ်များဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုသောကျပန်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သောဖိုင်။ OpenSSL ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် PuTTY နှင့် VMWare ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော software မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤဖိုင်ကို '.RND' (filename မပါ) ဟုခေါ်ပြီးအဓိက C: လမ်းညွှန်တွင်သိမ်းသည်။